🥇 ▷ Hel Xiaomi Mi Mix 2S qiimaha Xiaomi Mi A3 ✅
Hel Xiaomi Mi Mix 2S qiimaha Xiaomi Mi A3
Waqti ka waqti ayaa aan kuu soo qaadannaa qaar ka mid ah taleefannadii ugu wanaagsanaa qiime aad u xiiso badan. Shaki la’aan, Xiaomi Mi Mix 2S waa mid ka mid ah mobiladaha ugu wanaagsan ee aan iibsan karno maanta, gaar ahaan tixgelinta tan Xiaomi Mi Mix 2S ayaa bixiya. Sababta oo ah qiimaheeda ayaa haatan si ficil ahaan ah ula mid ah kan cusub ee ‘Xiaomi Mi A3’.
Dhowr daqiiqo ka hor waxaan kaliya kuu sheegaynaa warqadda farsamada ee dhammaystiran ee Xiaomi Mi 9 5G, taas oo soo jiidashadeeda weyn shaki la’aan ahaan doonta processor-ka Snapdragon 855 Plus.
Xiaomi Mi Mix 2S waxay ku bixisaa qiimaha Xiaomi Mi A3
Xiaomi Mi A3 waxay timid bishaan bakhaarada, oo leh qaabeyn iyo xaashi farsamo oo qaar badani aysan wali ku qancin haddii aan isbarbar dhigno Xiaomi Mi A2 sanadkii la soo dhaafay. Tani waxay hadda ku kacdaa 249 euro gudaha AmazonWell, Xiaomi Mi Mix 2S, oo ka mid ah taleefannada ugu xiisaha badan ee aad maanta iibsan karto, ayaa kaliya ku kacaya 10 euro oo dheeraad ah. Sababtoo ah Amazon hadda waxaan ka iibsan karnaa 259 euro, Qiimo lagu qoslo mobilada oo qiimihiisu ka badnaa labanlaab waqtiga la bilaabay, sanad ka hor. Xaqiiqdii waa 40 euro ka yar midda ay hadda bil uun ahayd, sidaa darteed waxaan shaki ku jirin qiimaha ugu hooseeya ee aan ku aragnay taleefankaan.
Iibso Xiaomi Mi Mix 2S caddaan gudaha Amazon Ka iibso Xiaomi Mi Mix 2S madow madow gudaha Amazon
Markaa waxaan wajahaynaa fursad dahabi ah oo aan ku helno moobiil awood leh oo leh nashqad cajiib ah isla qiimahaas oo taleefan mobiilku ka yaraado, sida Xiaomi Mi A3. Xaalada Xiaomi Mi Mix 2S waxaan leenahay a 5.99 inch shaashad aan lahayn xuduudo, oo leh kamaradda selfi ee xagga hoose. ay processor-ka waa Snapdragon 845, sidaa darteed waxaan wajahaynaa mobil aad u awood badan oo aan shaki lahayn, ku dhawaad ​​heerarka ugu sarreeya ee kala duwan ee sanadkaan 2019, aad ayey u yaryihiin gadaal. Noocaani wuxuu leeyahay 6GB oo RAM ah iyo 64GB oo kaydinta gudaha ah.
Kaamirada waxay ahayd horumar ka badan Xiaomi Mi Mix 2, oo leh laba 12 megapixel dareemayaal, halka horena waxay leedahay 5 megapixel sensor. Batariga wuxuu leeyahay awood fiican oo ah 3400mAh, iyo sidaad u aragto, naqshadeynteedu waxay soo baxdaa indhaha, intaa waxaa dheer tani waa nooca cad, in kasta oo madow waxaan haysanaa 10 euro oo keliya, haddii ay tahay qaabkaaga. Intaas waxaa sii dheer, waxay suuqa la timid Android 8, waxay hadda tijaabineysaa Android 9, tan ugu caansanna waa in sanadka soo socda uu helo Android 10, marka waxaad lahaan doontaa nidaamka ugu dambeeyay ee hawlgalka Google, waxbadan lama weydiin karo.